erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: လူ ဦး ရေ -based လေ့လာမှုများ (2002) ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်
int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2002 Dec;14(6):422-32.
Prins J ကို1, Blanker MH, Bohnen AM, သောမတ်စ် S က, Bosch ရဲ့ JL.
တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ လေ့လာရေးအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်ရာထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အထူးတီထွင်စံစာရင်းကိုအသုံးပြုခြင်း, ဤလေ့လာမှုများ၏အတိုင်းအတာများရဲ့အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပျံ့နှံ့နှုန်းအပေါ်ဒေတာထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဥရောပ (23), USA သို့ (15), အာရှ (5) နှင့်သြစတြေးလျ (2) မှ 1 လေ့လာမှုများဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 12-item ကိုစံစာရင်းကိုတွင်အတိုင်းအတာများရဲ့အရည်အသွေး5ထံမှ 12 မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့2y နှင့်အသက်ကြီးသူများအတွက်% 40 မှ 86 y ကထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် 80% မှမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ ပျံ့နှံ့ဒေတာများအကြားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ, အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းလွှာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်များအကြားအဓိကကျသည့်အတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုအားဖြင့်မလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ED ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်အစီရင်ခံရသောအခါအားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ပေး၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။ ထို့ပြင်နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများနိုင်ငံများတလွှား ED ၏စစ်မှန်တဲ့ပျံ့နှံ့တည်ထောင်ရန်ကောက်ယူရပါမည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ရက်နေ့တွင် epidemiological သုတေသနလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်နှင့်အထွေထွေလူဦးရေအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်လေ့လာမှုများမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သညျ။ ထို့နောက်အတော်ကြာ unsystematic ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ဤလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရွေးချယ်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ပါပြီ။1,2,3,4,5 ဤအပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများစု ED ၏ပျံ့နှံ့လေ့လာမှုများအကြားမတူကြောင်းကောက်ချက်ချပေမယ့်အဲဒီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အနက်ကိုတော်တော်များများပြဿနာတွေကနှေးကွေးနေသည်။ ပထမဦးစွာဆောင်းပါးတွေကိုဒရွေးချယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်များဟာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်မဆိုတင်ပြကြသည်မဟုတ်, ဒုတိယ, အဘယ်သူမျှမမှတ်ချက်လွတ်လပ်သောလေ့လာချက်များ၏တရားဝင်မှုအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းသည်, တတိယ, နည်းနည်းအာရုံကိုအသုံးပြုသော ED ၏အဓိပ္ပာယ်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားချို့ယွင်းချက်ကအခြားသုတေသနအထွက်နှုန်းအတွက် epidemiological ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတှငျတှေ့သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။6 အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ် elucidate မှတစ်ဦးစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအထူးသဖြင့်အာရုံကိုတစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများ၏အတိုင်းအတာများအရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးကိုမှပေးဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ပျံ့နှံ့လေ့လာမှုများများ၏တရားဝင်မှုအကဲဖြတ်များအတွက်သတ်မှတ်ချက်စာရင်းတီထွင်ခဲ့သည်။
[ခွန်အားမရှိခြင်း OR erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု OR လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု] နှင့် [ယေဘုယျလူဦးရေ OR အသိုင်းအဝိုင်း-based OR လူဦးရေ-based OR ရောဂါ]: ဒီဇင်ဘာလ 2001 ခုနှစ်တွင်တစ်ရှာဖွေရေးအောက်ပါသော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု. Medline နှင့် Psychinfo database ထဲတွင် 1966 ထံမှဒီဇင်ဘာလ 2001 စေခဲ့သည်။ ပစ္စည်းများအားလုံး '' အားလုံးလယ်ကွင်း '' ကို အသုံးပြု. ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ စာပေရှာဖွေရေးအင်ျဂလိနှင့်ဒတ်ခ်ျဘာသာစကားကန့်သတ်ခဲ့သည်။
ဖော်ထုတ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များနှင့် abstraction ဆောင်းပါးတွေ၏ဆက်စပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လွတ်လပ်စွာ (JP နှင့် MHB ဖြင့်ဖြစ်စေ) ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကိုးကား '' ထည့်သွင်း ',' မသေချာ 'သို့မဟုတ်' 'ဖယ်' 'အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ နှစ်ခုသုံးသပ်ရေးအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှု၏အမှု၌, သဘောတူသည့်သဘောထားကွဲလွဲဖြေရှင်းဖို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနောက်မှဖယ်ထုတ်လိုက်အညွှန်းစာမရှိတော့ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်သည်ဆောင်းပါးကိုးကားစရာစာရင်းဟာ Medline အတွက်မ psyche-အချက်အလက်ဒေတာဘေ့စအတွက်မတွေ့ရှိနောက်ထပ်လေ့လာမှုများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ check လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။
ပါဝင်သည်လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းရွေးချယ်ရေးအောင် (JP နှင့် MHB ဖြင့်ဖြစ်စေ) အသေးစိတ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီအထွေထွေလူဦးရေကနေရေးဆွဲယောက်ျားပါဝင်သည်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအပေါ်မူရင်းဒေတာတွေကိုအစီရင်ခံတဲ့ Cross-Section လေ့လာမှုဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ဆောင်များတွင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလေ့လာမှုများခဲ့ကြသည်။ abstraction ပါဝင်သည်ဟုစာတမ်းများသာချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။
အတိုင်းအတာများအရည်အသွေးစီရင်တော်မူခြင်းအတွက်တရားဝင်မှုနှစ်ခုရှုထောင့်အရေးကြီးလှသည်: ပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှုကျပန်းအမှားထဲကနေဆိတ်ကွယ်ရာတိကျတိုင်းတာခြင်းဆိုလိုသော်လည်းပြင်ပတရားဝင်မှု, အခြားလူဦးရေမှလေ့လာမှုရလဒ်များ application ရဲ့ပြောပြတယ်။ ပျံ့နှံ့လေ့လာမှုများ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ဘို့အဘယ်သူမျှမစံစာရင်းမရရှိနိုင်သကဲ့သို့, စာရင်းတစ်ခု (တွေ့မြင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် စားပွဲတင် 1), အရာပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှုအပေါ်ခြောက်လပစ္စည်းများ, ပြင်ပတရားဝင်မှုအပေါ်ခြောက်လပစ္စည်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါ်သုံးပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ အဆုံးစွန်သောပစ္စည်းများကိုယင်းအတိုင်းအတာများရဲ့အရည်အသွေးအကဲဖြတ်တွင်ထည့်သွင်းပေမယ့်အစီရင်ခံစာများ၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်ကိုမပေးနေကြသည်။ ပစ္စည်းများအားလုံး (JP နှင့် MHB အားဖြင့်) လွတ်လပ်စွာအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောသွင်းယူခဲ့ကြသည်နဲ့သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုခြိနျမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းပြချက်များအတွက်အရည်အသွေးအကဲဖြတ်မျက်နှာဖုံးအခြေအနေများအောက်တွင်ဖျော်ဖြေမခံခဲ့ရပါဘူး။ သဘောထားကွဲလွဲမှု၏အမှု၌, သဘောတူညီမှုရောက်ရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1: ပျံ့နှံ့လေ့လာမှုများ၏အတိုင်းအတာများရဲ့အရည်အသွေးအကဲဖြတ်များအတွက်လိုအပ်ချက်
စံချိန်စံညွှန်းမီပုံစံများအသုံးပြုခြင်းနှစ်ခုသုံးသပ်ရေး (JP နှင့် MHB) လွတ်လပ်စွာတစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာများထုတ်ယူ။ အဘယ်သူမျှမသို့မဟုတ်မလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များဆောင်းပါးအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့စာရေးဆရာများအမည်များသို့မဟုတ်တိကျတဲ့လေ့လာမှုအုပ်စုများသုံးပြီးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်တူညီသောလေ့လာမှုပေါ်ရှိအခြားစာတမ်းများများအတွက် Medline ဒေတာဘေ့စရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းပြချက်များအတွက်မရှိကြိုးစားမှုကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေစာတမ်းများ၏စာရေးဆရာများကိုဆက်သွယ်ထားခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါမူလတန်းရှာဖွေရေး 581 မျှစိတ္တဇမရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အဘို့အ 63 မသေချာအညွှန်းစာအပါအဝင်အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြရာ 11 အညွှန်းစာ, လြှော့။ ဤအစာတမ်းများ၏ရည်ညွှန်းစာရင်း၏တစ်ဦးကစစ်ဆေးမှုများ 39 အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြရာ 30 နောက်ထပ်ကားအညွှန်း, လြှော့။ ထို့ကြောင့် 93 အညွှန်းစာအရည်အချင်းပြည့်မီဘို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ မူရင်းအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်း (ထိုအခြင်း 47 စာတမ်းများသည်အောက်ပါအကြောင်းရင်းများကြောင့်ချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်n25 ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်ရာ = 13), ယေဘုယျလူဦးရေကနေဆင်းသက်လာမဟုတ်လေ့လာမှုလူဦးရေ (n= 8), စက္ကူ (သာစိတ္တဇပါဝင်သည်n= 2), စက္ကူ (ED မသတင်းအချက်အလက်များပါရှိသောn= 8), အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် (n= 1), ကိုမရနိုင်ပါ (n= 3) ။ ဆယ်ပါးစာတမ်းများမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု (MMAS) မှအစပြု; ဤအရာလေးစာတမ်းများအားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်အသုံးပြုကြသည် ဟူ. ၎င်း, အခြားခြောက်ဦးကဤသုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာမျှအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေး။ တဦးတည်းဆောင်းပါးရွေးချယ်ထားလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူတွေ့ရှိရခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 40 စာတမ်းများကနေဒေတာတွေကို 23 လေ့လာမှုများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 နှစ်ခုသာဒီလေ့လာမှုတွေ၏ရည်ညွှန်းစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းအားဖွငျ့ရှေးခယျြခဲ့သညျ။
စားပွဲတင်2အရည်အသွေးအကဲဖြတ်၏ရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။ 4.5 (အကွာအဝေး 1-6) ပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှုအပေါ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ပျမ်းမျှအားတွင်, ပြင်ပတရားဝင်မှုအပေါ် 4.3 ပစ္စည်းများ (အကွာအဝေး 2-6), အပြုသဘောသွင်းယူခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုသာလေ့လာမှုများ 12 တရားဝင်မှုစံအားလုံးအတှကျအပြုသဘောသွင်းယူ;40,41,45 ပညာရေးအပေါ်တစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစဉ်းစားသည့်အခါသို့သော်, နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုများ (နှစ်ခုပစ္စည်းများအပေါ်အပျက်သဘောသွင်းယူh နှင့် i) ပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှု၏။
စားပွဲတင် 2: ကိုရွေးချယ်လေ့လာမှုများ၏တစ်နှစ်တာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အရည်အသွေးအကဲဖြတ်
ရွေးချယ်ထားလေ့လာမှုများတွင်ထည့်သွင်းအဆိုပါလူဦးရေ၏တစ်ဦးကဖော်ပြချက်၌ပေးသောဖြစ်ပါတယ် စားပွဲတင် 3။ 11 လေ့လာမှုများမှာအရည်အချင်းပြည့်မီစံသတ်မှတ်ထားသောမခံခဲ့ရပါ။ ငါးလေ့လာမှုများအတွက်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များ nonresponders (တစ်နမူနာ) မှရရှိသောခံခဲ့ရသော်လည်း nonresponders အပေါ်အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်, 11 လေ့လာမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့; ပြင်ပ databases ကို, အခြေခံလူဦးရေမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အခြေခံသင်တန်းသားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှပါဝင်သူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခုနစ်ခုသည်အခြားလေ့လာမှုများ။ ယင်းနမူနာနည်းလမ်းကြောင့်အခြားလေ့လာမှု, (တိုက်ကြီးပြည်နယ်အပေါ် stratified) ခုနှစ်, လေ့လာမှုတွင်လူဦးရေသင်တန်းသားများကိုရှေးခယျြခဲ့ကြရာမှလူထုမှယေဘူယျလို့မရပါ။7
စားပွဲတင် 3: ရွေးချယ်ထားလေ့လာမှုများအတွက်လူဦးရေ၏ဖျေါပွခကျြ
စားပွဲတင်4erectile function ကိုနှင့်ပညာရေးတို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဒေတာရယူအသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များကိုစာရင်းပြုစု။ 17 ခုနှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်လေ့လာနေ, ခြောက်လလေ့လာမှုများအင်တာဗျူးအသုံးပြုငါးလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များမသတ်မှတ်ရသေးပါခံခဲ့ရသည်။
စားပွဲတင် 4: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အသုံးပြုသောနည်းလမ်း, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပျံ့နှံ့နှုန်း
အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းလူဦးရေအတွက်ပညာရေးအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားမေးခွန်း, ED အပေါ်တစ်ခုတည်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေပါရှိသော7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45 သို့မဟုတ်တစ်ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ဆင်းသက်လာခဲ့သောထံမှ ED အပေါ်မေးခွန်းတွေဆက်တိုက်။39,40,41,45
နှစ်ခုလေ့လာမှုများအတွက်နှစ်ခုနည်းလမ်းများ ED, ဆိုလိုသည်မှာ, ED အပေါ်တစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်တစ်ဦးပိုမိုကြီးမားမေးခွန်းလွှာဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။40,41,45 အဆိုပါ MMAS မှာတော့တစ်ဦးစံကိုက်ညှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်မေးခွန်းများကို imprecise အဖြေများကိုထံမှခွန်အားမရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။10 ပညာရေးအပေါ်ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာများတွင်တစ်ဦးဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးခန်းနမူနာဒီရည်ရွယ်ချက် ( 'လက်တွေ့နည်းလမ်း') အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်,10 သော်လည်းအဆိုပါ longitudinal အချက်အလက်ပေါ်အကြာတွင်အစီရင်ခံစာများအတွက်လေ့လာမှုနမူနာကိုယ်တိုင်က ( 'MMAS နည်းလမ်း') ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။12 အဲဒီနှစျခုနည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားသောပျံ့နှံ့နှုန်းခဲ့သည်။12
ပညာရေး၏အဘယ်သူမျှမချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် "ခွန်အားမရှိခြင်း '' သတ်မှတ်လေးလေ့လာမှုများနှင့် '' erectile အခက်အခဲ '' သတ်မှတ်သုံးလေ့လာမှုများ, '' erectile မသန်စွမ်း 'သို့မဟုတ်' 'စိုက်ထူပြဿနာများ' 'သော်လည်း, တဦးတည်းအစီရင်ခံစာအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော 16 ခုနှစ်တွင် ED တစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ် (ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်လေ့လာနေ စားပွဲတင် 4).
ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း (သိသိသာသာကွဲပြားစားပွဲတင် 4) ။ အားလုံးလေ့လာမှုများအသက်အရွယ်တိုးတက်နှင့်အတူပျံ့နှံ့အတွက် linear တိုးပြသခဲ့သည်။ နှစ်ခုလေ့လာမှုများမအသက်အရွယ်-တိကျတဲ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပေးထားခဲ့ကြသည်။8,9,26 40 y ကအဟောင်းထက်လူပျိုများအတွက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း (ခြောက်လလေ့လာမှုများအစီရင်ခံ) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2ထံမှ 9% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ 70 y က (သုံးလေ့လာမှုများအစီရင်ခံ) ပျံ့နှံ့ထက်ယောက်ျားအထက်သော်လည်း (13 လေ့လာမှုများအစီရင်ခံ) 10 y ကို% 71 မှ 80 ထံမှအရွယ်ရှိထက်အသက်ကြီးများအတွက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း, 18 ထံမှ 86% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။
ပျံ့နှံ့၏တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုနှစ်ခုသာအားလုံးအတှကျဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Olmsted ကောင်တီလေ့လာမှု (OCS) တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ပျံ့နှံ့နေတဲ့14,15,16 နှင့်ဂျပန်စစ်တမ်း32 အကြမ်းအားဖြင့်အလားတူတို့ 70 ၏အသက်အရွယ်အပြီးပျံ့နှံ့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးပြသခဲ့သည်။ Leicestershire အတွက်အစီရင်ခံပျံ့နှံ့နေတဲ့ (ဗြိတိန်)23 Krimpen aan တွင်း IJssel (နယ်သာလန်) မှသူများထက်အသက်ကြီးတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုများ (60-69 နှင့် 70-79 က y) အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြ၏43,44 ဗြိတိန်လေ့လာမှုလွတ်လပ်သောပညာရေးပြင်းထန်မှုအမျိုးအစားပေါ်သတင်းအချက်အလက်မပေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှိုင်းယှဉ်အတွက်ဒတ်ခ်ျလေ့လာမှုမှာအားလုံး ED ပြင်းထန်မှုအမျိုးအစား, ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
ဒါကယေဘုယျလူဦးရေအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ် focussing စာပေ၏ပထမဆုံးစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က Re-ရှာဖွေရေး၏ဤလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာ epidemiological လယ်ပြင်၌ရရှိနိုင်ပါဒေတာ, nonsystematically အကျဉ်းချုပ်ခဲ့ကြ1,2,3,4,5,47,48,49,50,51,52,53,54 ဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျလူဦးရေအပေါ်တစ်ဦးအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ။55 အထူးသဖြင့်, ပါဝင်သည်လေ့လာမှုများ၏ရွေးချယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်,1,2,3,4,5,47,48,49,50,51,52,53,54 နှင့်ထည့်သွင်းလေ့လာမှုတွေများ၏တရားဝင်မှုစာရေးသူဆွေးနွေးမခံခဲ့ရပါဘူး။1,2,3,4,5,47,48,49,50,51,52,53,54,55 လက်ရှိလေ့လာမှုမှာမရရှိနိုင်စာပေခြုံငုံသုံးသပ်ပေးထားသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးအကဲဖြတ်တင်ပြထားပါသည်, စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်၏အစီရင်ခံဘို့အဆိုပြုလမ်းညွှန်ချက်များအရသိရသည်။56,57
နှစ်ခုသာလေ့လာမှုများမူလတန်းရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာလုံလောက်သောခဲ့ကြောင်းအကြံပြုသည်ကိုကိုးကားစာရင်းကနေတဆင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စာအုပ်တွေအစီရင်ခံလေ့လာရေးလက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီတစ်ဘက်လိုက်မှုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ကြောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ထားလေ့လာမှုများ၏စာရေးဆရာများကိုဆက်သွယ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်; မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏စာရေးဆရာများကိုဆက်သွယ်ရလွယ်ကူစေခြင်းငှါ, နှင့်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်အဟောင်းတွေလေ့လာမှုများကနေထက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအား, ငါတို့သတင်းအချက်အလက်ဆောင်းပါးစာဖတ်သူများကအသုံးပြုခံရဖို့အလွယ်တကူရရှိနိုင်ဖြစ်သင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ပျံ့နှံ့လေ့လာမှုများ၏အတိုင်းအတာများရဲ့အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ရရှိနိုင်ခဲ့ဘို့အဘယ်သူမျှမစံစာရင်းအဖြစ်ကျနော်တို့သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဘုံသဘောမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီးထိုကဲ့သို့သောစာရင်းဖွံ့ဖြိုးပြီး (စားပွဲတင် 1), အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်သည်အခြားအခြေအနေများ၏ပျံ့နှံ့မှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည့်။
အဆိုပါဂုဏ်ထူးခြုံငုံရမှတ်အပေါ်အခြေခံပြီးမမှန်ကန်တဲ့ခိုင်လုံသောနှင့်အကြား လုပ်. , cut-off မှတ်၏အသုံးပြုမှုကိုမတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ရွေးချယ်ထားလေ့လာမှုများအချို့အပျက်သဘောရမှတ်များ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ရှိသည်ကြောင်း, သို့သော်အသိအမှတ်ပြုရပါမည်စားပွဲတင် 2) ။ သူ့ဟာသူမှာတော့လေ့လာမှုတစ်ခုတရားဝင်ဖြစ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်အစီရင်ခံတိပါလျှင်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ကန့်သတ်လိမ့်မည်။
ခြုံငုံအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်အပြင်တော်တော်များများသဘောထားမှတ်ချက်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုလူဦးရေ (ကို item ၏ကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်သီးခြားတရားဝင်မှုစံအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်d) အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ပါ။ 11 လေ့လာမှုများမှာတုန့်ပြန်မှုနှုန်းနိမ့်ထက် 70% နှင့်မလုံလောက်သောဒေတာလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေနှစ်ခုထဲမှာ, အနိမ့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းသင်တန်းသားများသို့မဟုတ်နောက်ထပ်တိုင်းတာ၏ပါဝင်မှုထံမှလိုအပ်သောမြင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။23,31,32 အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခြောက်လေ့လာမှုများအတွက်မရှိသတင်းအချက်အလက်လေ့လာမှုကာလအပေါ်ပေးထားခဲ့သည်။
အမျိုးမျိုးသောစာရေးဆရာများကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု '' များအတွက်လုံလောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူမှီထိန်းသိမ်းနည်း ED-'inability ၏သဘောတူညီမှုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုရည်ညွှန်းပေမယ့်58သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာများနှစ်ဆပိုများလာ, နှစ်ခုသာအမှန်တကယ်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏ခန့်မှန်းချက်ထဲမှာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။36,37,38 တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာများ၏ဒီဇိုင်းကနေရရှိသောပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, ဥပမာအားဖြင့်, Cologne ED မေးခွန်းလွှာအတွက် ED-rating စကေးငါးခုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည့်မေးခွန်းများကိုပါဝင်ပါသည်;39 တဦးတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ်အပြုသဘောရမှတ်နီးပါးအလိုအလျှောက်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုအပေါ်အပြုသဘောရမှတ်ဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် ED-rating စကေးအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်စွမ်းရည်အပေါ်မေးခွန်းတစ်ခုပါဝင်သည်;39 ဒီဆောက်လုပ်ရေး ED ၏ပျံ့နှံ့မှုသိသိသာသာပိုမိုမှန်းဆဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ MMAS အတွက်စံကိုက်ညှိလေ့လာမှုတစ်ခုဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးခန်းနမူနာများအသုံးပြုမှုဒီလေ့လာမှုအပေါ်တစ်ဦးအကြာတွင်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သော ED ၏ပျံ့နှံ့မှုတစ်ခုကိုပိုမိုမှန်းဆဖို့ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။12 အဆိုပါ MMAS ၏ longitudinal အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ ED အပေါ်တစ်ခုတည်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်ပြင်းထန်ခွန်အားမရှိခြင်းအလယ်အလတ်မှသူတို့အဘို့, နိမ့်ပျံ့နှံ့မှုမေးခွန်းလွှာမှထည့်သွင်းခဲ့သည်။12,13
14 လေ့လာမှုများမှာတော့တစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကို erectile function ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်; သို့သော်ဤမေးခွန်းများကိုအဘယ်သူအားမျှတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကနှစ်ခုလေ့လာမှုများ ED အပေါ်တစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကို epidemiological စစ်တမ်းများများတွင်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပြသပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခု၏တိကျသောရေးဆွဲရေးဆွေးနွေးတင်ပြမခံခဲ့ရပါဘူး။13,45 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျနော်တို့စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားသောသည့်အခါအခြားသောလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းများကိုခိုင်လုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။
လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ် ED ၏အစီရင်ခံပျံ့နှံ့နေတဲ့သိသိသာသာများနှင့်လေ့လာမှုများအကြားအဓိကကျသည့်အတိုင်းအတာများကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကွဲပြားကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါကြောင့်ထိုအကွဲပြားပျံ့နှံ့နိုင်ငံများသို့မဟုတ်အတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုများအကြားစစ်မှန်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, ကြီးမားသောအတိုင်းအတာများမူကွဲသုံးအထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်အများစုလေ့လာမှုများအစီရင်ခံပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ထိခိုက်။ သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ, OCS နှင့်ဂျပန်လေ့လာမှုများ၏ဆင်တူဒီဇိုင်းများနှိုင်းယှဉ်စေခြင်းငှါအခွင့်ပါဘူး။14,15,16,31,32 အဆိုပါ OCS ၏အစီရင်ခံစာများတွင်,14,15,16 သို့သော် ED မရှိအတိအကျကိုပျံ့နှံ့နှုန်းနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာချက်များ၏ပေါင်းစပ်အစီရင်ခံစာတွင်သည်, တိကျသောမေးခွန်းများကိုဖို့တုံ့ပြန်မှုများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဖြန့်ဖြူးထက်အခြားပေးအပ်ထားတယ်။32 ကြှနျုပျတို့သညျဤအဆုံးစွန်သောအစီရင်ခံစာအနေဖြင့်ပျံ့နှံ့ဆင်းသက်လာ: ဤလူတို့၏ 44% (109 ထဲက 245) ရှိသည်ဖို့အစီရင်ခံကြောင်း ''ထိုအချိန်ကာလ၏စိုက်ထူအဘယ်သူအားမျှ'' ။32 အံ့သြစရာကဒီပျံ့နှံ့ 'ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လေ့လာမှုကနေတစ်ခုအစောပိုင်းကအစီရင်ခံစာနှင့်အညီမဟုတ်ပါဘူးထိုအချိန်ကာလ၏စိုက်ထူအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အဘယ်သူအားမျှရှိသည်ဖို့နိုငျခဲ့ကွသူမြားဘာသာရပ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့ ... 70 သို့မဟုတ်အထက်အသက်ယောက်ျားထက်ပိုလေးပုံတစ်ပုံမှ''14
Leicestershire (ဗြိတိန်) နှင့် Krimpen aan တွင်း IJssel (နယ်သာလန်) မှအဆိုပါလေ့လာမှုများအတူတူချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်မေးခွန်းလွှာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုက်ကြီး Society ကအသုံးပြုခဲ့ အထီးလိင် မေးခွန်းလွှာ) ။23,44 အန္တရာယ် profile များကိုနှင့်ထိုပြဿနာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုအတွက်ကွာခြားချက်များနှစ်ဦးစလုံးကျော် 60 အသက်နှင့်လူတို့၏စပ်ကြား ED ၏အစီရင်ခံပျံ့နှံ့အတွက်ထပ်တူထပ်မျှအထောက်အကူပြုမည် နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကဤခြားနားချက်ကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
ယခင်ကပြုလုပ်ပါ (MMAS ဒေတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်) စပိန်အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ပျံ့နှံ့ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများဖြတ်ပြီး ED ၏အမြင်များတွင်ကွဲပြားမှုမှစွပ်စွဲခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါကောက်ချက်ချခဲ့သည်။45 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်သို့သော်ဤကွဲပြားခြားနားမှုကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်စေသောအသုံးပြုခဲ့ကြသည်သောမေးခွန်းများကိုအတွက်ကွဲပြားမှုအားဖြင့် (ကိုတွေ့မြင်ကြသည် စားပွဲတင် 3).
အများအပြားကကောက်ချက်အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်စာပေ၏ဤစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုကနေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာအစီရင်ခံစာများအများအပြားအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့နှုန်းအပေါ်တရားဝင်ဒေတာများကိုမလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ယေဘူယျသို့မဟုတ်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ရာမှကောက်ချက်ဆွဲရန်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာ erectile function ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းများသိသိသာသာခြားနားသည်။ (အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းကနေဆင်းသက်လာ) အဓိပ္ပာယ်အတွက်ကွာခြားချက်များအစီရင်ခံပျံ့နှံ့နေတဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့အဓိကအတားအဆီးဖြစ်ကြသည်။ ဤအလေ့လာမှုလူဦးရေအတွက် comorbidity အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များသည်အတိုင်းတတိယအရွယ်-တိကျတဲ့နှင့်ပြင်းထန်မှု-တိကျတဲ့အပေါ်အလားတူ, တိကျသောဒေတာဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားလေ့လာမှုများအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှု, ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်သတင်းပို့တဲ့အခါမှာကျနော်တို့အချက်အလက်များ၏အနက်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံးကိုဖော်ပြ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပျံ့နှံ့နေတဲ့အစီရင်ခံကွဲပြားမှုသာအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားအချက်များမှစွပ်စွဲရမည်အကြောင်းရှိမရှိရှင်းလင်းဖို့ရည်ရွယ်သင့်တယ်။ အကြီးစားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆောင်များတွင်လေ့လာမှုများဤမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်အရှိဆုံးသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပေမယ့်မရရှိနိုင်ပါပျံ့နှံ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့် re-ခွဲခြားစိတ်ဖြာစိုဒေတာ, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလည်းသင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Wagner, G, Saenz က de Tejada ဗြဲ အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် Update ကို br Med J ကို 1998; 316: 678-682 ။
·2။
Lewis က RW ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ Urol Clin N ကို Am 2001; 28: 209-116 VII ။
Melman တစ်ဦးက, Gingell JC ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့် pathophysiology J ကို Urol 1999; 161: 5-11 ။
·4။
Lerner SE, Melman တစ်ဦးကခရစျတျော GJ ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်ပိုပြီးအကြံပြုချက်များ J ကို Urol 1993; 149: 1246-1255 ။
Bortolotti တစ်ဦးက, Parazzini က F, Collis, E, Landoni အမ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ၏ရောဂါ int J ကို Androl 1997; 20: 323-334 ။
Breslow RA, Ross က SA, ပေါင်းပင် DL ။ ရောဂါအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အရည်အသွေး နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 1998; 88: 475-477 ။
Diokno AC အ, ဘရောင်းကို MB, Herzog AR ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို Arch International Med 1990; 150: 197-200 ။
Solstad K ကို Hertoft P. လူလတ်ပိုင်းဒိန်းမတ်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ frequency Arch လိင်ပြုမူနေ 1993; 22: 51-58 ။
Solstad K ကို Davidsen အမ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဒိန်းမတ်လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများ-အတိုင်းအတာများထည့်သွင်းစဉ်းစား၏သဘောထားများ Maturitas 1993; 17: 139-149 ။
Feldman HA et al. သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို J ကို Urol 1994; 151: 54-61 ။
Araujo AB et al. စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေး: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုကနေ Cross-Section ရလဒ်များကို Psychosom Med 1998; 60: 458-465 ။
Kleinman KP et al. မက်ဆာချူးဆက်အထီးအိုမင်းလေ့လာမှုမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်အတန်းများအတွက်အသစ်အငှား variable ကို J ကို Clin Epidemiol 2000; 53: 71-87 ။
ဒါဘီ, CA et al. လူဦးရေ-based လေ့လာမှုများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတိုင်းအတာ: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုအတွက်တစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်များအသုံးပြုခြင်း int J ကိုသင်ျခြို Res 2000; 12: 197-204 ။
Panser LA က et al. 40 နှစ်ယောက်ျားအသက်အရွယ် 79 ၏လိင် function ကို: အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင် urinary ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၏ Olmsted ကောင်တီလေ့လာ J ကို Am သက်ကြီးရွယ်အိုများ Soc 1995; 43: 1107-1111 ။
Panser LA က et al. ဆီးကျိတ်၏သဘာဝသမိုင်း: Non-တုံ့ပြန်မှုဘက်လိုက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ int J ကို Epidemiol 1994; 23: 1198-1205 ။
Epstein သည် RS et al. ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia များအတွက်ဘဝမေးခွန်းလွှာများအသစ်တစ်ခုအရည်အသွေး validation J ကို Clin Epidemiol 1992; 45: 1431-1445 ။
Helgason AR et al. လူဦးရေ-based လေ့လာမှု: သက်ကြီးရွယ်အိုဆွီဒင်လူတို့အားအလိုဆန္ဒ, စိုက်ထူ, အော်ဂဇင်နှင့် ejaculatory လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်သူတို့၏အရေးပါမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်အရွယ်အို 1996; 25: 285-291 ။
Helgason AR et al. သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တို့တွင်အရက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနဲ့ဆက်စပ်အချက်များ J ကို Urol 1997; 158: 155-159 ။
Macfarlane GJ et al. ပြင်သစ်ရပ်ရွာထဲတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်နှင့်ဆီးအခွအေနေအကြားဆက်ဆံရေး J ကို Clin Epidemiol 1996; 49: 1171-1176 ။
Sagnier PP et al. ပြင်သစ်တွင်ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia များအတွက်ပြုပြင်ထားသောအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးလက္ခဏာအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦး epidemiological စစ်တမ်း၏ရလဒ်များ J ကို Urol 1994; 151: 1266-1270 ။
Malmsten UG, Milsom ငါ Molander ဦး, Norlen LJ ။ urinary incontinence ဝမ်းနှင့်အောက်ပိုင်းဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေ: 45 နှစ် 99 အသက်ယောက်ျားတစ်ဦး epidemiological လေ့လာမှု J ကို Urol 1997; 158: 1733-1737 ။
Ventegodt အက်စ် လိင်နှင့်ဒိန်းမတ်အတွက်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကို Arch လိင်ပြုမူနေ 1998; 27: 295-307 ။
Frankel SJ et al. အနိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေနဲ့အတူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု J ကို Clin Epidemiol 1998; 51: 677-685 ။
Jolleys ဖက်စပ် et al. ရပ်ရွာထဲတွင် urinary လက္ခဏာတွေ: သူတို့ဘယ်လို bothersome ရှိပါသလဲ br J ကို Urol 1994; 74: 551-555 ။
Koskimäki J ကို, Hakama M က, Huhtala H ကို, Tammela TL ။ လိင်ဆက်ဆံမှု၏ကြိမ်နှုန်းအပေါ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: ဖင်လန်နိုင်ငံလူဦးရေကိုအခြေခံပြီးပျံ့နှံ့လေ့လာမှု J ကို Urol 2000; 164: 367-370 ။
Dunn KM, Croft PR စနစ်, Hackett GI ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ: အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ယင်းပျံ့နှံ့၏လေ့လာမှုနှင့်လိုအပ် Fam Pract 1998; 15: 519-524 ။
Dunn KM, Croft PR စနစ်, Hackett GI ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလူဦးရေစစ်တမ်း: ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်, လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အစည်းအရုံး J ကို Epidemiol အဝန်းကနျြးမာရေး 1999; 53: 144-148 ။
Laumann EO, ပိုက်တစ်ဦး, ရို RC ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း ဂျေအေအမ်အေ 1999; 281: 537-544 ။
Fugl-Meyer AR ။ 18-74 နှစ်အရွယ်ဆွီဒင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်း, ပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု Scand J ကို Sexol 1999; 2: 79-105 ။
Helmius G. အ ဆှီဒငျလိင်စစ်တမ်း။ တစ်ခုကမိတ်ဆက်စကားနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများပြောင်းလဲမှုများအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက် Scand J ကို Sexol 1998; 1: 63-70 ။
Tsukamoto T က et al. အလားတူအမေရိကန်လေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတူလူထုအခြေပြုလေ့လာမှုမှာဂျပန်အမျိုးသားများတွင်ဆီးကြိတ်၏ပျံ့နှံ့ J ကို Urol 1995; 154: 391-395 ။
Masumori N ကို et al. နှစ်ခုလူထုအခြေပြုလေ့လာမှုအမေရိကန်ယောက်ျား-ရလဒ်များကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဂျပန်အမျိုးသားများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏ကျဆင်းမှု Urology 1999; 54: 335-344 ။
Pinnock သမဝါယမ, Stapleton လေး, မာရှယ် VR ။ ရပ်ရွာထဲတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တစ်ပျံ့နှံ့လေ့လာမှု Med J ကို Aust 1999; 171: 353-357 ။
· 34 ။
Pinnock ကို C, မာရှယ် VR ။ ရပ်ရွာထဲတွင်ဒုက္ခနိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေ: တစ်ပျံ့နှံ့လေ့လာမှု Med J ကို Aust 1997; 167: 72-75 ။
Parazzini က F et al. frequency နဲ့အီတလီနိုင်ငံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆုံးအဖွတျ EUR Urol 2000; 37: 43-49 ။
Kongkanand အေ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့။ ထိုင်း Erectile အလုပ်မဖြစ် epidemiological လေ့လာမှု Group မှ int J ကို Androl 2000; 23: 77-80 ။
Group မှ TEDES ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခု epidemiological လေ့လာမှုအပိုင်း (1: ပျံ့နှံ့နေတဲ့) J ကို Med Assoc ထိုင်း 2000; 83: 872-879 ။
Ansong KS, Lewis ကနေ C, Jenkins P ကို, ဘဲလ်ဂျေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ: ကျေးလက်က New York ပြည်နယ်အတွက်လူထုအခြေပြုလေ့လာမှု အမ်း Epidemiol 2000; 10: 293-296 ။
Braun M က et al. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ: ကို 'Cologne အမျိုးသားစစ်တမ်း' '၏ရလဒ်များကို int J ကိုသင်ျခြို Res 2000; 12: 305-311 ။
Meuleman EJ et al. [Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အသက်တာ၏အရည်အသွေးပေါ်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု; ။ Boxmeer လေ့လာမှု] Erectiestoornis: prevalentie en op က de kwaliteit ဗန် leven invloed; het Boxmeeronderzoek ။ (ဒတ်ချ်ခုနှစ်တွင်။ ) Ned Tijdschr Geneeskd 2001; 145: 576-581 ။
Boyle P ကို et al. အဆိုပါ UrEpiK လေ့လာမှု: ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia, ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ဗြိတိန်, ပြင်သစ်, နယ်သာလန်နှင့်ကိုရီးယားအတွက်အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့် Interstitial cystitis ၏ cross-section စစ်တမ်း J ကို Epidemiol Biostat 1998; 3: 179-187 ။
Blanker MH et al. လက်တွေ့ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် byperplasia ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအပေါ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့် nonresponse ဘက်လိုက်မှု၏အားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှု: အထီး urogenital ကျေးရွာအုပ်စုပြဿနာများ၏ Krimpen လေ့လာမှုနှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း BJU Int 2000; 85: 665-671 ။
Blanker MH et al. တစ်ဦးလူထုအခြေပြုလေ့လာမှု: အဟောင်းတွေဒတျချြယောက်ျားအတွက် erectile နှင့် ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ဆက်နွယ်နေပါသည် J ကို Am သက်ကြီးရွယ်အိုများ Soc 2001; 49: 436-442 ။
Blanker MH et al. 50 နှစ်ယောက်ျား 78 တစ်အသိုင်းအဝိုင်း-based နမူနာထဲမှာ Erectile နှင့် ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဟောင်း: ပျံ့နှံ့မှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်. Urology 2001; 57: 763-768 ။
မာတင်-Morales တစ်ဦးက et al. ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စပိန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်များ: အ Epidemiologia de la Disfuncion Erectil Masculina လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို J ကို Urol 2001; 166: 569-574 ။
အစိမ်းရောင် JS et al. Gwent, ဝေလနယ်များတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး BJU Int 2001; 88: 551-553 ။
Gentili တစ်ဦးက, Mulligan တီ အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု Clin သက်ကြီးရွယ်အိုများ Med 1998; 14: 383-393 ။
Korenman စင်ကာပူဒေါ်လာ။ လက်တွေ့ပြန်လည်သုံးသပ် 71: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏နားလည်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်လာ J ကို Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 1985-1988 ။
Monga အမ် အိုမင်းလိင်တံ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု သက်ကြီးရွယ်အိုများ Nephrol Urol 1999; 9: 27-37 ။
Morley je ။ ခွန်အားမရှိခြင်း နံနက် J ကို Med 1986; 80: 897-905 ။
Spector အိုင်ပီ, ကယ်ရီအမတ်။ လိင်အလုပ်မဖြစ်၏ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့: သည့်ပင်ကိုယ်မူလစာပေ၏အရေးပါသောသုံးသပ်ချက်ကို Arch လိင်ပြုမူနေ 1990; 19: 389-408 ။
Avis NE ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အိုမင်း: အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လူဦးရေ-based လေ့လာမှုများ J ကို Gend တိကျတဲ့ Med 2000; 3: 37-41 ။
· 53 ။
Benet AE, Melman အေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ရောဂါ Urol Clin N ကို Am 1995; 22: 699-709 ။
Cohan P ကို, Korenman စင်ကာပူဒေါ်လာ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု J ကို Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 2391-2394 ။
Simons သည် JS, ကယ်ရီအမတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ပျံ့နှံ့: သုတေသနဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကနေရလဒ်တွေကို Arch လိင်ပြုမူနေ 2001; 30: 177-219 ။
Oxman အေဒီ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးများကိုအဘို့အစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း br Med J ကို 1994; 309: 648-651 ။
Stroup DF et al. ရောဂါအတွက်စူးစမ်းလေ့လာမှု meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အစီရင်ခံများအတွက်အဆိုပြုချက်ကို။ ကူးစက်ရောဂါ (Moose) အုပ်စုတွင်စူးစမ်းလေ့လာမှု၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဂျေအေအမ်အေ 2000; 283: 2008-2012 ။
· 58 ။
သင်ျခြိုအပေါ် NIH သဘောတူညီချက်ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Panel ကို။ NIH သဘောတူညီချက်ကိုညီလာခံ။ ခွန်အားမရှိခြင်း ဂျေအေအမ်အေ 1993; 270: 83-90 ။
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်သူမ၏အတိုင်းအတာများနှင့်မှတ်ချက်များအကြံပြုချက်များဘို့မစ္စ Arianne Verhagen ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အထွေထွေအလေ့အကျင့်, Erasmus တက္ကသိုလ်ရော့တာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်ဦးစီးဌာန
J ကို Prins
& S သောမတ်စ်
Urology, တက္ကသိုလ်ဆေးရုံရော့တာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်ဦးစီးဌာန
စာပေးစာယူမှ MH Blanker.
06 ဇွန်လ 2002
13 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2002